I-Steward Cottage, i-Fortwilliam Estate.
I-Steward Cottage inalo lonke ikhubalo elidala lehlabathi leNdawo yaseIrish Estate ngelixa isabonelela ngolonwabo olongezelelweyo olufunwa ziindwendwe zangoku. Ukubuyela kwintendelezo ezinzileyo enegadi ezincinci kwicala nangaphambili, le ndlu yangasese yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kunye nokufaka i-refuel okanye ukonwabela impelaveki yosapho elizweni.
I-Stewards Cottage iyafikeleleka ngesitulo esinamavili.
I-Steward Cottage ihlalisa abantu abalishumi ngolu hlobo lulandelayo:
Igumbi lokulala elinye losapho, ibhedi yenkosi kunye nebhedi enye.
Igumbi elikhulu elimanzi.
Amagumbi amabini okulala.
Igumbi elinye lokulala elikhulu losapho, elinebhedi yenkosi kunye nebhedi enye.
Igumbi lokuhlambela elinye.
Le ndlu inekhitshi elikhulu kunye negumbi lokutyela elahlukileyo.
Kukho igumbi lokuhlala elinesitovu kunye nomabonakude oyi-intshi ezingama-32.
Samkela onke amalungu osapho eFortwilliam, izindlu zethu zokuhlala zinobuhlobo nezinja ukuba nje zigcinwe phantsi kwaye ziphuma kumagumbi okulala.
IFortwilliam iyonwabela indawo ekhethekileyo kwiWest Waterford entle. Kukho izinto eziluncedo kunye nemisebenzi ehambelana nazo zonke izinto ezikhethwayo kubandakanya iFortwilliam Fishery apho umntu anokuloba khona uMlambo iBlackwater odume kakubi ngesalmon yasendle.
Inani leelwandle zeflegi eluhlaza okwesibhakabhaka, iintaba kunye nemithi zonke zikufutshane.
IClonea Strand yimayile ezimbini ubude, ububanzi bonxweme olunesanti malunga nemizuzu eli-10 ukusuka eDungarvan. Ithathwa njengenye yam njengenye yeelwandle ezibalaseleyo kunxweme lwaseIreland olukuMzantsi Mpuma.
Abantu beza apha unyaka wonke ukuze bahambe uhambo olude, kunye nokubhabha iikayiti, bethatha umbono obanzi phezu kolwandle kunye neeNtaba zeComeragh. Inxalenye yendlela eluhlaza ibaleka emva kolwandle. Ubukho bomlindi ngexesha lexesha eliphakamileyo kwenza le ndawo ibe yindawo edumileyo yokuqubha kunye nemidlalo eyahlukeneyo yasemanzini.
Whiting Bay eArdmore
I-Whiting Bay lunxweme oluhle lwesanti kufutshane neArdmore, eCo Waterford. Kukulungele ukuhamba, ukusefa kunye nokuqubha ngamaza amakhulu ukuze ube nolonwabo kodwa ikhusi elincinane elinokufunyanwa. Ngoko ke kunokuba nomoya omncinci ngoko ke zilungiselele. Ukupaka iimoto akuyongxaki apha kunye neendawo zokupaka iimoto ezinkulu.
I-Stradbally yi-cove ethandekayo kunye neyona ndlela ingaqhelekanga, ekulungele ukuqubha, ukutshisa ilanga kunye nokudlala.Ikhuselwe ngamawa ngapha nangapha I-Stradbally ikhuselwe kakuhle kwaye xa i-tide iphuma kukho indawo ebanzi kunye nede yesanti ethambileyo. Le yindawo efanelekileyo kwiintsapho njengoko, kunye neendawo ezivulekileyo ezibanzi, kukho amachibi abantwana abangadlala kuwo kunye namatye ukuze abazali baphumle ecaleni.
Iintaba zeComeragh luluhlu olumangalisayo nolwahlukeneyo, olusuka elunxwemeni kufutshane neDungarvan phakathi kwelizwe ukuya kuthi ga eClonmel. Umbindi weentaba ze-Comeragh unethafa eliyi-boggy, ngelixa i-fringe ine-coums enamatye azaliswe yi-assortment emangalisayo yeeLoughs ezincinci. Apha uya kufumana i-Coumshingaun kunye ne-Coum Iarthair, kunye ne-Crotty's Lough, ethiywe ngegama lomaphula-mthetho owayelele phantsi kwezi ndawo zikude. Eminye imingxunya enzulu ibandakanya iCoumstillogue, iCoumalocha, iCoumfea, kunye neCoumtay. Ukuzikhangela zonke kunokwenza uphononongo olunomdla. (O.S. Discovery Series Map no. 75 igubungela indawo ngeenkcukacha ezinkulu) Uthungelwano lweengoma zehlathi zinika ukuhamba lula.
IColligan Wood: ime kwintlambo ebukekayo apho umlambo iColligan uhamba khona kwaye ungena elwandle eDungarvan Bay. Umhlaba ochumileyo (osuka kwilitye lentlabathi elibomvu elidala) uxhasa umhlaba oxubeneyo wemithi yeconifers kunye namagqabi abanzi-kuquka iNorway spruce, Western hemlock, Japanese larch, Sitka spruce, oak, ash, beech, maple, kunye nebirch. Amathambeka anemithi enqambileyo kwicala ngalinye lomlambo asathwele iintsalela zemithi emidala ye-oki. Eminye imithi iphawulwe ukuze ibonwe. I-Fox, i-squirrel ebomvu, i-bager, i-otter, i-stoat, imivundla, imivundla kunye ne-fallow deer zihlala zibonwa ehlathini kwaye umlambo we-Colligan ngumlambo ovelisa i-salmon kunye ne-trout yaselwandle nayo ekufuneka ibonwe. Ukusondela kweenkuni kwidolophu yaseDungarvan kuyenza ibe yindawo ethandwa kakhulu yokuhamba.
IWaterford Greenway yindawo ebukekayo ye-46km yokukhwela ibhayisekile endleleni kunye nomzila wokuhamba ngomzila kaloliwe omdala phakathi kweWaterford neDungarvan.
Yonwabela uhambo oluhle lokunqumla i-viaducts ezintathu ezide ukusuka emlanjeni ukuya elwandle.
Ngalo mzila e-Irelands Ancient East yindawo yokuhlaliswa kweeViking, iiNorman Castles, amabhodlo aphakathi, indawo yokusebenza yendlala, isikhululo sikaloliwe esidala kunye nololiwe welifa lemveli usahamba ecaleni kwendlela eSuir Valley Railway.
Sibambisene ne-Waterford Greenway Bike Hire kwaye siya kuququzelela iibhayisekile zakho, izigcina-ntloko kunye neepikiniki.
Umzila weGadi yaseWaterford.
I-Waterford Garden Trail inika into ekhethekileyo kubo bobabini abaqalayo kunye nomlimi onamava. Iintsuku ezininzi zinokuchithwa ukonwabela iintlobo ngeentlobo zezityalo kunye nezilwanyana, zonke ezinegalelo kubukhethekileyo bomtsalane wegadi kwindlela. I-Waterford Garden Trail ineendawo ezilishumi elinesine ezinomtsalane egadini kulo lonke elaseWaterford
Iigadi zeNqaba yaseLismore kunye neLismore Castle Art
Eyona nto ibalulekileyo kulo naluphi na uhambo oluya eLismore kukutyelela iLismore Castle Gardens kunye neLismore Castle Arts. Iigadi zembali eziphezulu nezisezantsi zigubungela iihektare ezisixhenxe kwindawo engenakuthelekiswa nanto.
ILismore Castle Arts yigalari yobugcisa yangoku.
Zonke iindwendwe eziqinisekisiweyo ziya kuthunyelwa iinkcukacha zabakhenkethi basekhaya.
Silapha ukuze siqinisekise ukuba ukuhlala kwakho kuyonwabisa kwaye zonke iindwendwe esizilindeleyo ziyafezekiswa.
Ngesicelo esikhethekileyo sinokulungiselela
> Intshayelelo ngokuLoba iiSalmon zasendle
> Iintsuku ezikhethekileyo zokuloba kumlambo iBlackwater nge ghillie
> iinkonzo. (Februwari ukuya kuSeptemba)